2017 April 14 | PuntlandTimes- Wararkii ugu dambeeyey Puntland iyo Somalia
SAWIRRO+XOG: M/weynaha Puntland oo la kulmay Safiirka UK ee Soomaaliya, Maxaase ka soo baxay?
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta 14 April 2017 kulan kula yeeshay xafiis kiisa uu ku leeyahay magaalada Muqdisho safiirka wadanka ingiriiska u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador Devid Concar. Kulanka uu Madaxweynuhu layeeshay danjiraha wadanka Ingiriiska Mr. Devid ayaa waxaa ku wehelinaayey Agaasimaha Guud ee Madaxtooyada dawladda Puntland Cabdinaasir Biixi Soofe. […]
AKHRISO XASAASI:- Fursadaha Farmaajo iyo Filashada 2021!!+WARBIXIN
MUQDISHO(P-TIMES)-Burburkii dalka Somalia waxa uu sababay kala irdoobida umada soomaaliyeed iyadoo qofkastaba taagtiis uu tilaabsaday, qaar dalalka deriska ah u hayaamay, qaar tahriibay iyo qaar kale oo xero qaxootinimo ku noqday sanado kidibna magangalyo ka helay wadamada Yurub, America iyo Australia. Waxaa jiray Iyana qaar kale oo dalka aan ka bixin lagu dul dagaalamay dhibaatooyin […]
Dowlada Mareykanka Oo Fulisay Codsigii DFS Iyo Ciidamo Ka Socda Oo Soo Gaaray Magaalada Muqdisho
MUQDISHO(P-TIMES)-Mareykanka ayaa ciidamo kooban u diray Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, si ay tababar u siiyaan Ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM. Saraakiil Mareykan ah ayaa u sheegay VOA in Ciidamadan ay ka dageen magaalada Muqdisho 2-dii bishan. Tagista Ciidamadan ayaa ka dambeysay markii dowladda Soomaaliya ay codsatay, sida ay xaqiijiyeen Saraakiisha Mareykanka. Ciidamo Mareykan ah […]
SAWIRRO:- Madaxweynaha JL Axmed Madoobe Iyo Danjiraha UK David Concar Oo Kulan Xasaasi Ah Yeeshay, Maxaa Looga Hadlay??+AKHRISO
MUQDISHO(P-TIMES)-Safiirka UK u qaabilsan Soomaaliya Danjire David Concar ayaa bilaabay kulamo uu la qaadanayo Madaxda Maamul goboleedyada dalka, kuwaasoo shalay qaarkood soo gaaray magaalada Muqdisho. Danjire David Concar ayaa kulankii u horeeyay la qaatay Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe), iyadoo ka wada hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay […]
XOG RASMI AH: Maxaa looga hadlayaa Shirka Hogaamiyaasha Siyaasada Soomaalida ee ka furmaya Muqdisho maanta?
MUQDISHO(P-TIMES)- Shir xasaasi ah ayaa ka furmaya Aqalka Madaxtooyada ee Soomaaliya, kaas oo dhexmaraya Hogaamiyaasha dawladdaha xubnaha ka ah dawladda faderaalka & Madaxda dawladda Muqdisho, waxaana uu noqonayaa kii ugu horeeyey noociisa ah ee ay yeeshaan Dawlad gobaleedyada & Dawladda faderaalka. Inta badan madaxda dawlad gobaleedyada ayaa kusugan Hotelka SYL ee magaalada Muqdisho, halkaas oo […]